Nisaina Tsara i Estera Mpanjakavavy | Tena Finoana
Nisaina Tsara sy Be Herim-po ary Tsy Tia Tena Izy
1-3. a) Nanao ahoana i Estera rehefa nankeny amin’ny vadiny? b) Inona no nataon’ny mpanjaka?
NANDEHA tsimoramora ho eny amin’ny seza fiandrianan’i Ahasoerosy i Estera, ary nidobodoboka be ny fony. Nangina be tampoka ny rehetra, ka reny hatramin’ny fanenon’ny kirarony sy ny fikasokasoky ny akanjony. Marina fa tsara be sady ngezabe ilay lapa sy ny andry ao anatiny. Nisy sary sokitra vita tamin’ny hazo sedera avy any Libanona, ohatra, ny valindrihana. Tsy navelany hiriorio tamin’izany anefa ny sainy, fa nibanjina ny mpanjaka izy. Teo am-pelatanan’izy io mantsy ny ainy.
2 Nijery azy tsara ilay mpanjaka, ary nanondro azy tamin’ny tehina volamena. Fihetsika tsotra ilay izy, nefa nanavotra an’i Estera. Tokony hovonoina mantsy izy, satria tonga teo amin’ny mpanjaka nefa tsy nantsoina. Nanondro azy tamin’ny tehiny anefa ny mpanjaka mba hanaporofoana fa voavela ny helony. Maivamaivana erỳ i Estera, ary nikasika ny tendron’ilay tehina.—Est. 5:1, 2.
Nankasitraka ny mpanjaka i Estera satria namindrany fo
3 Mpanankarena be i Ahasoerosy Mpanjaka. Voalaza fa ny akanjon’ny mpanjaka persianina fahiny fotsiny, dia efa nitentina ana hetsiny tapitrisa ariary. Tena nanam-pahefana be koa i Ahasoerosy. Tia an’i Estera anefa izy, ary hitan’i Estera tamin’ny fijeriny izany. Hoy izy: “Misy ilainao angaha, ry Estera vadin’ny mpanjaka ô, ary inona no tadiavinao? Fa na hatramin’ny antsasaky ny fanjakana aza dia homena anao!”—Est. 5:3.
4. Inona ny zava-tsarotra niandry an’i Estera?
4 Nanam-pinoana sy be herim-po i Estera, matoa sahy nankany amin’ny mpanjaka mba hiaro ny fireneny. Nahomby aloha izy hatreto, saingy mbola mafy kokoa ny niandry azy. Tsy maintsy handresy lahatra an’i Ahasoerosy i Estera hoe ilay mpanolo-tsainy tena natokisany ange ka ratsy fanahy. Nofitahin’io mpanolo-tsainy io mantsy i Ahasoerosy ka nanaiky handripaka ny firenen’i Estera. Inona àry no hataon’i Estera, ary ahoana no hanahafantsika azy?
Nahay nifidy “fotoana itenenana” izy
5, 6. a) Ahoana no nampiharan’i Estera ny Mpitoriteny 3:1, 7? b) Inona ny porofo fa nisaina tsara i Estera?
5 Tsy noresahin’i Estera teo no ho eo sy teo imason’ny olon-drehetra ilay olana. Mety ho nanala baraka ny mpanjaka mantsy izany, na koa handa i Hamana hoe tsy marina ilay izy. Inona àry no nataon’i Estera? Mety ho efa nampianarin’i Mordekay azy ilay toro lalana nasaina nosoratan’i Solomona Mpanjaka an-jatony taona talohan’io, hoe: ‘Ny zava-drehetra dia samy misy fotoana voatondro ho azy avy. Misy fotoana anginana ary misy fotoana itenenana.’ (Mpito. 3:1, 7) Fantatr’i Estera àry fa mila miandry fotoana mety tsara izy vao miteny.
6 Hoy izy: “Raha sitraky ny mpanjaka, dia aoka ny mpanjaka sy Hamana ho tonga any amin’ny fanasana nataoko ho azy anio.” (Est. 5:4) Nanaiky i Ahasoerosy ka nampiantso an’i Hamana. Hita hoe tena nisaina i Estera satria hainy tsara koa ny nifidy ny teny holazaina sy ny toerana mety kokoa hiresahana, sady tsy nanala baraka ny vadiny izy.—Vakio ny Ohabolana 10:19.
7, 8. Nanao ahoana ilay fanasana nataon’i Estera, nefa nahoana no mbola tsy nolazainy tamin’io ilay olana?
7 Nomanin’i Estera tsara ilay fanasana mba ho ao amin’ilay itiavan’ny vadiny azy mihitsy ny zava-drehetra. Nasiany divay tao ka faly erỳ i Ahasoerosy. (Sal. 104:15) Nanontany an’i Estera indray àry izy hoe inona no tadiaviny.
8 Hitan’i Estera anefa fa mbola tsy tamin’io ny fotoana tsara hitenenana. Nasainy indray àry i Ahasoerosy sy Hamana ny ampitso. (Est. 5:7, 8) Nahoana i Estera no mbola niandry? Tadidio fa notandindomin-doza ny fireneny, satria efa nahazo alalana tamin’ny mpanjaka i Hamana mba hamono azy ireo. Nitady an’izay fotoana mety indrindra àry izy. Mba te hampiseho koa izy hoe manaja an’ilay vadiny, ka izay no nanasany azy fanindroany.
9. Toetra manao ahoana ny faharetana, ary ahoana no hampisehoantsika hoe manam-paharetana toa an’i Estera isika?
9 Toetra sarobidy ny faharetana nefa vitsy no manana azy io ankehitriny. Marina fa nitebiteby i Estera sady efa tena te hiresaka an’ilay olana. Niandry ny fotoana mety hitenenana anefa izy. Afaka manahaka azy isika, ohatra hoe rehefa mahita zavatra tsy mety. Raha te handresy lahatra an’izay olona manana fahefana hanitsy izany isika, dia tokony hanam-paharetana. Hoy ny Ohabolana 25:15: “Faharetana no ahafahana mandresy lahatra ny mpitari-tafika, ary ny teny malefaka mahavita manapaka taolana.” Tokony hahay hifidy fotoana hitenenana toa an’i Estera àry isika, sady halemy fanahy rehefa miteny. Mety ho voavaha ilay olana amin’izay, na dia mafy be amintsika aza ny mandresy lahatra an’ilay olona. Nitahy an’i Estera ve i Jehovah noho izy nisaina tsara sy nanam-paharetana?
Nahazo rariny izy satria nanam-paharetana
10, 11. Nahoana i Hamana no lasa tezitra be, ary inona no nasain’ny vadiny sy ny namany nataony?
10 Soa ihany i Estera fa nanam-paharetana. Nisy zavatra maromaro nitranga mantsy taorian’izay. ‘Ravoravo ny fon’i Hamana’ rehefa avy namonjy an’ilay fanasana voalohany, satria izy irery no nasain’ny mpanjaka sy ny vadiny. Nahita an’i Mordekay anefa izy rehefa nandalo teo am-bavahadin’ny lapa, ka “tezitra be.” Mbola tsy niankohoka taminy ihany mantsy i Mordekay. (Est. 5:9) Tsy hoe tsy te hanaja akory i Mordekay, fa tsy nety tamin’ny eritreriny ny hiankohoka eo anatrehan’i Hamana. Nivadika tamin’i Jehovah izy raha nanao izany.
11 Notantarain’i Hamana tamin’ny vadiny sy ny namany izay nataon’i Mordekay. Nampirisihin’izy ireo àry izy mba hampanao tsato-kazo 22 metatra mahery, ary hangataka alalana amin’ny mpanjaka hoe hahantona eo i Mordekay. Maika erỳ i Hamana hanao izany.—Est. 5:12-14.
12. Nahoana no nasain’ny mpanjaka novakina ny boky niresaka ny tantaran’ny fanjakany, ary inona ny vokany?
12 Nahagaga anefa fa “tsy nahita tory” ny mpanjaka ny alin’io, ka nasainy novakina ny tantaran’ny fanjakany. Voalaza tao fa efa saika nisy hamono izy, saingy nampahafantarin’i Mordekay ilay izy ka novonoina ireo olon-dratsy. Tonga saina tampoka àry ny mpanjaka, ka nanontany ny mpanompony hoe inona ny valisoa nomena an’i Mordekay. Namaly ry zareo hoe mbola tsy nisy.—Vakio ny Estera 6:1-3.
13, 14. a) Tantarao izay nanjo an’i Hamana. b) Inona no nolazain’ny vadiny sy ny namany taminy?
13 Sahiran-tsaina ny mpanjaka ka nanontany hoe iza no tandapa ao an-tokotany ao, mba hasainy hikarakara an’izany. Iza hoy ianao no tao? I Hamana. Toa tonga aloha be mantsy izy satria maika hangataka alalana hamono an’i Mordekay. Tsy nahavita nangataka akory anefa izy, fa ny an’ny mpanjaka no tonga aloha hoe: “Inona no tokony hatao amin’izay lehilahy tian’ny mpanjaka homem-boninahitra?” Noheverin’i Hamana fa izy no tao an-tsain’i Ahasoerosy, ka maika erỳ izy namaly hoe hampanaovina ny akanjon’ny mpanjaka ilay lehilahy ary hampitaingenina ny soavaliny. Hasiana tandapa iray koa hitondra azy eran’i Sosana sy hiantsoantso hoe nahazo voninahitra izy. Hay i Mordekay ilay lehilahy! Alao sary an-tsaina ange ny endrik’i Hamana vao naheno an’izany e! Ary iza hoy ianao no nasain’ny mpanjaka hiantsoantso eo alohan’i Mordekay? I Hamana!—Est. 6:4-10.
14 Nanao tsy fidiny an’izay nasaina nataony i Hamana, ary nody haingana avy eo sady nalahelo be. Nilaza ny vadiny sy ny namany fa fambara ratsy izany, ka tsy hahavoa an’i Mordekay izy.—Est. 6:12, 13.
15. a) Inona ny vokany rehefa nanam-paharetana i Estera? b) Nahoana isika no tokony hiandry an’i Jehovah?
15 Raha tsy nanam-paharetana i Estera, dia tsy ho nitranga mihitsy izany rehetra izany. Nieritreritra i Hamana hoe hahazo voninahitra, kanjo izy indray no voa. Ary iza moa no mahalala raha i Jehovah mihitsy no nanao izay tsy hampahita tory ny mpanjaka? (Ohab. 21:1) Tsy mahagaga àry raha mampirisika antsika ny Baiboly mba ho “vonona hiandry.” (Vakio ny Mika 7:7.) Raha miandry an’i Jehovah isika, dia ho hitantsika fa tsara lavitra noho izay mety hoeritreretintsika ny vahaolana homeny.
Sahy niteny izy
16, 17. a) Oviana ilay fotoana hitan’i Estera hoe tokony hitenenana? b) Inona no tsy nampitovy azy sy Vasty?
16 Tsy sahy nampiandry ny mpanjaka intsony i Estera tamin’ilay fanasana faharoa, fa tsy maintsy hiresaka an’ilay olana amin’izay. Ahoana anefa no hilazany an’ilay izy? Soa ihany fa nanontany azy indray ny mpanjaka hoe inona no tadiaviny. (Est. 7:2) Tonga àry ilay fotoana tokony hitenenany.
17 Nivavaka mangina angamba i Estera vao nilaza hoe: “Raha mahazo sitraka aminao aho, ry mpanjaka ô, ary raha sitraky ny mpanjaka, dia ny hitsimbinana ny aiko no angatahiko ary ny hitsimbinana ny fireneko no tadiaviko.” (Est. 7:3) Nanome toky izy hoe vonona hanaiky izay “sitraky ny mpanjaka”, izany hoe izay fantany fa mety. Tsy nitovy mihitsy i Estera sy Vasty, ilay vadin’ny mpanjaka taloha. Nanao fanahy iniana nanala baraka ny vadiny mantsy i Vasty. (Est. 1:10-12) I Estera anefa tsy nanakiana ny mpanjaka hoe natokitoky befahatany an’i Hamana. Niangavy azy kosa izy mba hiaro azy sy ny fireneny.
18. Ahoana no nanazavan’i Estera an’ilay olana?
18 Azo antoka fa taitra ny mpanjaka naheno an’izany sady nalahelo be. Dia hisy ho sahy hamono ny vadiny tokoa ve? Hoy i Estera: “Namidy izahay, dia izaho sy ny fireneko, mba haripaka sy hovonoina ary haringana. Raha mba namidy ho mpanompolahy sy mpanompovavy fotsiny mantsy izahay, dia ho nangina ihany aho, saingy hitondra fahavoazana ho an’ny mpanjaka koa izany loza izany, ka tsy tokony havela hitranga!” (Est. 7:4) Nohazavain’i Estera tsara ilay olana. Nilaza koa anefa izy hoe ho nangina ihany raha tsy hovonoina ry zareo fa hatao andevo fotsiny. Foko iray manontolo anefa no ho ripaka raha tsy niteny izy, ka na ny mpanjaka aza ho voa mafy satria ho faty koa ny vadiny.
19. Inona ny toetra tokony hananantsika raha te hahay handresy lahatra isika?
19 Ahoana àry raha misy olana lehibe tsy maintsy lazainao amin’ny fianakavianao na amin’ny olona iray manana fahefana? Raha manam-paharetana sy manaja ary milaza ny marina toa an’i Estera ianao, dia haharesy lahatra azy.—Ohab. 16:21, 23.
20, 21. a) Inona no nolazain’i Estera, ary nanao ahoana ny mpanjaka raha vao naheno izany? b) Inona no nataon’i Hamana rehefa tratra izy?
20 Hoy i Ahasoerosy: “Iza no olona ho sahy hanao izany, ary aiza izany olona izany?” Alao sary an-tsaina ange e! Sady nanondro i Estera no nilaza hoe: “Io Hamana ratsy fanahy io no rafy sy fahavalo!” Natahotra be i Hamana, fa ilay mpanjaka kosa tonga dia boramena be. Tezitra izy satria ilay mpanolo-tsaina natokisany mihitsy no namitaka azy, mba hanao sonia didy hamonoana ny vady malalany. Nirintona nankany an-jaridaina izy, ka tany izy no nampitonitony ny fony.—Est. 7:5-7.
Sahy nampibaribary i Estera hoe ratsy toetra i Hamana
21 Tratra i Hamana! Saro-tahotra anefa izy, ka nitalaholaho teo an-tongotr’i Estera. Rehefa niverina ny mpanjaka ka nahita azy teo, dia tezitra be sady niampanga azy hoe nitady hametaveta ny vadiny. Tsy maintsy ho faty àry i Hamana. Nosaronana ny lohany ary nentina niala teo izy. Nisy tandapa iray avy eo nilaza tamin’ny mpanjaka fa nampanao tsato-kazo i Hamana, mba hanantonana an’i Mordekay. Nasain’i Ahasoerosy nahantona teo avy hatrany àry i Hamana!—Est. 7:8-10.
22. Ahoana no ahitana hoe tsy namoy fo na lasa tsy nanam-pinoana i Estera, ka modely ho antsika?
22 Be loatra ny tsy rariny ankehitriny. Mety ho kivy àry ianao rehefa iharan’izany, ary hihevitra fa tsy hisy fanantenana intsony. I Estera anefa tsy namoy fo mihitsy na hoe lasa tsy nanam-pinoana. Sahy nilaza ny marina kosa izy rehefa tokony hiteny. Natoky izy avy eo fa i Jehovah no hanao ny ambiny. Tokony hanahaka azy isika. Mbola tsy niova mantsy i Jehovah. Vitany foana ny manafay ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka, ka ny fandrika ataon’izy ireny ihany no hamandrihany azy, toy ny nataony tamin’i Hamana.—Vakio ny Salamo 7:11-16.
Tsy mba tia tena izy
23. a) Inona ny valisoa nomen’ny mpanjaka an’i Mordekay sy Estera? b) Ahoana no nahatanterahan’ilay faminanian’i Jakoba momba ny fokon’i Benjamina? (Jereo ilay efajoro hoe “ Faminaniana Tanteraka.”)
23 Efa fantatr’i Ahasoerosy fa i Mordekay no niaro azy tsy hisy hamono. Fantany koa anefa izao fa hay izy no nitaiza an’i Estera. I Mordekay àry no nataony praiminisitra solon’i Hamana. Nomeny an’i Estera kosa ny tranon’i Hamana sy ny harenany rehetra, ary i Mordekay no nasain’i Estera hiandraikitra an’izany.—Est. 8:1, 2.
24, 25. a) Nahoana no tsy nijanona tamin’izao i Estera na dia efa maty aza i Hamana? b) Inona no nataon’i Estera mba hamonjena ny fireneny?
24 Nitsotsotra amin’izay ve i Estera satria afa-doza izy sy Mordekay? Tia tena izy raha nanao izany, satria efa niely be ilay didy navoakan’i Hamana mba hamonoana ny Jiosy rehetra. Nampanao karazana fanandroana nantsoina hoe Pora na Antsapaka mihitsy aza i Hamana, mba hamantarana ny andro mety tsara hanatanterahana ilay teti-dratsy. (Est. 9:24-26) Mbola azo sakanana ve anefa ilay izy? Afaka volana maromaro vao ho tonga ilay andro, nefa tena mandeha be ny fotoana.
25 Nanao vivery ny ainy indray i Estera, ka nankany amin’ny mpanjaka na dia tsy nantsoiny aza. Niangavy ny vadiny izy mba hanafoana an’ilay didy handripahana ny fireneny. Tsy azo foanana intsony anefa izay didy navoaka tamin’ny anaran’ny mpanjaka persianina. (Dan. 6:12, 15) Nomen’ny mpanjaka fahefana hanao lalàna vaovao àry i Estera sy Mordekay, hoe mahazo miaro tena ny Jiosy. Nisy iraka nitaingin-tsoavaly nandeha haingana nilaza an’izany tamin’ny Jiosy rehetra. Alao sary an-tsaina ange e! Velom-bolo indray ireo Jiosy eran’ilay fanjakana. (Est. 8:3-16) Nanomana fiadiana izy ireo ary vonona hiaro tena. Soa ihany fa nisy an’ilay didy vaovao, fa raha tsy izay dia tsy ho afaka hanao an’izany izy ireo. Hanampy azy ireo ve anefa i “Jehovah Tompon’ny tafika”?—1 Sam. 17:45.
Namoaka didy ho an’ny Jiosy eran’ny Fanjakana Persianina i Estera sy Mordekay
26, 27. a) Inona no nitranga rehefa nampian’i Jehovah ny vahoakany? b) Inona ny faminaniana tanteraka rehefa maty ny zanak’i Hamana?
26 Tonga amin’izay ilay andro, ary efa vonona ny vahoakan’Andriamanitra. Nisy manam-pahefana persianina maro mihitsy aza niandany tamin’izy ireo. Lasa nalaza be mantsy fa i Mordekay Jiosy indray izao no praiminisitra. Nampian’i Jehovah ny vahoakany ka nandresy, ary nataony resy tanteraka ny fahavalon’izy ireo mba tsy hamaly faty intsony. *—Est. 9:1-6.
27 Novonoina koa ny zanak’i Hamana folo lahy, mba tsy hamaly faty an’i Mordekay noho izy lasa niandraikitra ny tranon’i Hamana. (Est. 9:7-10) Tanteraka àry ilay faminaniana hoe tsy hisy tavela intsony ny Amalekita satria fahavalon’ny vahoakan’Andriamanitra. (Deot. 25:17-19) Ireo zanakalahin’i Hamana ireo angamba no farany indrindra tamin’io firenena io.
28, 29. a) Nahoana i Estera sy ny fireneny no nasain’i Jehovah niady? b) Nahoana isika no mila manahaka an’i Estera?
28 Tsy maintsy niantsoroka andraikitra lehibe i Estera, na dia mbola tanora aza. Izy, ohatra, no namoaka didy nahafahana niady tamin’ny fahavalo sy namono azy ireny. Azo antoka fa tsy mora izany, nefa tsy tian’i Jehovah ho ripaka ny firenen’Israely. Ho avy amin’izy ireo mantsy ilay Mesia nampanantenaina, izay hany fanantenan’ny olombelona rehetra. (Gen. 22:18) Tsy mandray anjara amin’ny ady intsony izao ny Kristianina, satria efa nandrara izany ilay Mesia tamin’izy teto an-tany.—Mat. 26:52.
29 Manao ady ara-panahy anefa isika izao. Vao mainka miezaka mafy mantsy i Satana mba hampivadika antsika amin’i Jehovah. (Vakio ny 2 Korintianina 10:3, 4.) Soa ihany fa nisy an’i Estera mba ho modely ho antsika. Enga anie àry isika hanam-pinoana toa azy ka ho be herim-po, hisaina tsara sy hanam-paharetana rehefa mandresy lahatra, ary tsy ho tia tena fa ho vonona hiaro ny vahoakan’Andriamanitra.
Fanontaniana Momba An’i Estera
Nahoana no navelan’i Mordekay hanambady mpanompo sampy i Estera?
Misy manam-pahaizana milaza fa mpanararaotra i Mordekay. Te hahazo voninahitra, hono, izy ka nasainy nanambady mpanjaka i Estera. Tsy voaporofo anefa izany. Tsy nivadika tamin’Andriamanitra izy, ka tsy izy mihitsy no hampirisika an’i Estera hanambady mpanompo sampy. (Deot. 7:3) Milaza aza ny lovantsofina jiosy fa niezaka nisakana an’ilay izy i Mordekay. Mety hoe tsy nanan-tsafidy anefa i Estera sy Mordekay, satria vahiny tao amin’ilay tany. Masiaka be koa ilay mpanjaka, ary natao toy ny andriamanitra mihitsy. Niharihary anefa tatỳ aoriana fa nampiasain’i Jehovah hiaro ny vahoakany i Estera, matoa navelany hanambady an’i Ahasoerosy.—Est. 4:14.
Nahoana no tsy misy hoe Jehovah mihitsy ao amin’ny bokin’i Estera?
Azo inoana fa i Mordekay no nanoratra ny bokin’i Estera. Notehirizina niaraka tamin’ny taratasim-panjakana persianina angamba ilay boky, izay vao nentina tany Jerosalema. Raha nisy anaran’i Jehovah àry tao, dia mety ho nosimban’ny mpanompo sampy ilay boky. Na dia tsy hita ao aza anefa ny anaran’i Jehovah, dia mazava amin’ilay tantara fa izy mihitsy no namonjy ny vahoakany. Mahaliana koa fa ahitana an’ilay anarana ihany ao amin’ilay boky amin’ny teny hebreo, saingy tsy miharihary be. Misy teny efatra fanahy iniana natao nifanesy tao, ka ny litera voalohany amin’ireo no manome an’ilay anaran’Andriamanitra, na koa ny litera farany. Andininy vitsivitsy no ahitana an’izany.
Marina ve ny tantara ao amin’ny bokin’i Estera?
Misy manakiana hoe tsy marina ny tantara ao. Voamariky ny manam-pahaizana sasany anefa fa hain’ilay mpanoratra tsara ny tsipiriany momba ny fianakavian’ny mpanjaka persianina sy ny tranony ary ny fombafomban’izy ireo. Marina fa tsy miresaka an’i Estera ireo boky tsy ara-pivavahana sisa tavela. Tsy izy irery anefa ny olona ambony tao amin’ny fanjakana tsy voaresaka mihitsy fa misy maro hafa koa. Misy boky tsy ara-pivavahana koa milaza fa nisy lehilahy natao hoe Mardukâ (na Mordekay), niasa tao amin’ny lapa tao Sosana tamin’ny fotoana nitrangan’ilay tantara ao amin’ny bokin’i Estera.
Naminany momba an’i Benjamina zanany lahy i Jakoba, 1 200 taona mahery talohan’ny andron’i Estera sy Mordekay. Hoy izy: “Hamiravira foana toy ny amboadia i Benjamina. Hihinana ny rembiny izy amin’ny maraina, ary hizara izay nobaboiny izy amin’ny hariva.” (Gen. 49:27) Ilay hoe “maraina” eo, dia manondro ny fotoana voalohandohany nisian’ny mpanjaka teo amin’ny Israely. Taranak’i Benjamina, ohatra, i Saoly, ilay mpanjaka voalohany, sy ny miaramila sasany niaro ny vahoakan’i Jehovah tamin’izany. Ilay hoe “hariva” kosa, dia ny fotoana tsy nisian’ny mpanjaka intsony teo amin’ny Israely. I Estera sy Mordekay indray tamin’izay no niady tamin’ny fahavalon’i Jehovah ary nandresy. Samy taranak’i Benjamina izy ireo. Toy ny hoe ‘nizara babo’ koa ry zareo satria lasany ny fananan’i Hamana. Tanteraka àry ilay faminaniana.
^ feh. 26 Nomen’ny mpanjaka andro iray fanampiny ny Jiosy avy eo mba handreseny ny fahavalony. (Est. 9:12-14) Mankalaza an’io fandresena io ny Jiosy hatramin’izao, ka manao fety isaky ny volana Adara (faramparan’ny Febroary ka hatramin’ny voalohandohan’ny Martsa). Antsoina hoe Porima io fety io, avy amin’ilay teny hoe Pora na Antsapaka nataon’i Hamana.
Ahoana no ahitana fa nisaina tsara i Estera, ka nahay nifidy ny “fotoana itenenana”?
Inona ny vokany rehefa nanam-paharetana i Estera?
Inona ny porofo fa be herim-po sy tsy tia tena i Estera?
Inona avy no hataonao mba hanahafana an’i Estera?
Hizara Hizara Nisaina Tsara sy Be Herim-po ary Tsy Tia Tena Izy